PressReader - Ilanga: 2019-01-07 - Uyaqhubeka umbango koloMncwango
Uyaqhubeka umbango koloMncwango
Owe-IFP uthi yena wenqaba ukusayina leso sivumelwano
Ilanga - 2019-01-07 - Front Page - CEBO BUTHELEZI
LUSEYINZUKAZIKEYI udaba lwabaholi bamaqembu amabili ezepolitiki besibongo esisodwa, oluthinta umhlaba wakwaMncwango, KwaNongoma.
Impi iphakathi kukaMnu Albert Mangaqa Mncwango we-IFP (imeya yaKwaNongoma) noMnu Zwakele Mncwango ongumholi weDA KwaZulu-Natal.
UMncwango we-IFP usola oweDA ngokuhlomula imali u-R3 million kuMasipala waKwaNongoma ngendawo okwakuthiwa izohlomulisa umphakathi, kukhuphuke nomnotho. Lo mhlaba okukhulunywa ngawo, kuthiwa ungaphansi kweso likaZwakele egameni lenkampani yakhe, iNgqondo Consultant Solutions, uphethwe yiNgonyama Trust.
Ngokuthola kweLANGA, uZwakele wanxuswa wumndeni ukuba abeyiso lalo mhlaba, okungamasimu aKwaMangqwashu, KwaNongoma. Kuthiwa kubekhona ukungaboni ngasolinye kulaba baholi njengoba besemaqenjini ezepolitiki angafani.
Lokhu kuholele ekubeni uMncwango we-IFP esengena esihlalweni sobumeya KwaNongoma, wabona indaba ka-R3 million, wenqaba ukusayina isivumelwano sokuba oweDA ahlomule ngale mali bese kuthuthukiswa le ndawo ngokuba kwakhiwe izitolo, amahhovisi kahulumeni nenkundla yezemidlalo.
UZwakele utshele ILANGA ukuthi lolu daba uzolusukumela njengoba kusanda kuphuma umbiko ngophenyo olwenziwe yiqembu lakhe, iDA, watholwa emsulwa.
Ngokombiko ILANGA - eliwubonile lo mbiko - uveza ukuthi kube nokugxambukela kwezepolitiki nokudicilela phansi izithunzi kulolu daba. Ngasekugcineni, lo mbiko uthi kazikho izinyathelo ezizothathelwa uZwakele ngoba kabukho ubufakazi obuveza isiqinisekiso sokuthi le mali yakhokhelwa le nkampani, “futhi kusobala ukuthi ukungaboni ngasolinye komndeni kuholele kulesi simo, akukho okuhlanganisa iqembu nakho konke lokhu”.
U-Albert uthe: “Ubufakazi nginabo ukuthi uZwakele wayefuna ukuthatha umhlaba wamasimu ethu siwumndeni ayowudayisa kwamasipala ngo-R3 million.
"Ngavimba sekuthiwa mangisayine. Phela izingqoko zase ziklelile, abantu sebazi ukuthi bazo w uhlukanise la nakanjani lo R 3 million, futhi ngiyabazi labo ayezodla nabo le mali kamasipala,” kusho uMncwango we-IFP.
Eziphendulela uZwakele ngalokhu uthe: “Kuyangithokozisa ukuthi imizamo yokungicekela phansi nokungcolisa igama lami kayiphumelelanga ngoba iqembu seliluphenyile udaba nganikwa ithuba lokuziphendulela.
"Ngayinika wonke amaphepha iFederal Legal Commission (FLC) ye-DA mayelana nodaba lomhlaba. Ngisaphinda ngithi angikaze ngithole ngisho indibilishi kuMasipala waKwaNongoma.
"Labo abenza izinsolo zika-R3 million, abathi wakhokhwa, mabaveze ubufakazi phela emphakathini. Bahlulwe yini wukunika i-FLC lobo bufakazi?
"Yingakho udaba sengiluse kubameli. Okunye nje, amanga kawahlangani neqiniso, amanga anesikhathi esincane kodwa iqiniso lihlale limile nje,” kusho uZwakele.
KWESOBUNXELE nguMnu Zwakele Mncwango weDA noMnu Albert Mncwango we-IFP okuthiwa isaqhubeka phakathi kwabo eyombango wendawo no-R3 million.